Mikasa hody any amin’ny faritra Sava: mpianatra 300 mihitsoka ao Toamasina | NewsMada
Mikasa hody any amin’ny faritra Sava: mpianatra 300 mihitsoka ao Toamasina
Par Taratra sur 26/03/2020
Efa hatramin’ny alatsinainy teo, mihitsoka eo anoloan’ny vavahadin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ireo mpianatra miisa 300 mikasa hamonjy fodiana any amin’ny faritra Sava. Misy amin’izy ireo ny avy eto Antananarivo, ny avy any Fianarantsoa, ny avy any Mahajanga, ny avy any Toliara. Ny asabotsy sy ny alahady teo izy ireo no niainga avy tany amin’ny toerana misy ny fianaran’izy ireo avy. Amin’ny alalan’ny sambo, izany hoe, amin’ny fitaterana an-dranomasina ny nokasaina hamonjena ny toerana misy ny fihaviany, saingy izao mihitsoka izao noho ireo fepetra efa napetraka amin’ny tsy tokony hisian’ny fivezivezena.
Nambaran’ny solontenan’ireo mpianatra fa misedra olana tokoa izy ireo ankehitriny, ary mitebiteby sy manahy mafy amin’ny mety ho fihanahan’ity valanaretina Coronavirus ity. Marihina mantsy fa na ny trano atorian’izy ireo ao Toamasina aza, tsy misy akory. Vokatr’izany, voatery tsy maintsy mitady izay azo atoriana eny an-dalana rehetra eny ny ankamaroany.
Tena antony mampihitsoka azy ireo ao Toamasina, araka ny fanadihadiana natao, noho ny fisian’ny didy navoakan’ny lehiben’ny disrikan’Antalaha sy ny prefektioran’i Sambava, laharana 031 MID/DPID/PREF-SBV/AHA/SP, ny 23 marsa teo, mandrara ny fidiran’ny olona ao anatin’ny faritra Sava, indrindra ireo avy any amin’ny faritra Analamanga.